Accueil > Gazetin'ny nosy > Fampanantenana : Miandry ilay fiainana manara-penitra ny Malagasy
Fampanantenana : Miandry ilay fiainana manara-penitra ny Malagasy
Nisesisesy tato ato ny fitetezam-paritra sy fitokanana foto-drafitrasa manara-penitra ataon’ny filoha Andry Rajoelina sy ireo mpikambana vitsivitsy ao anatin’ny governemanta. Toy ny mahazatra, tato anatin’ny roa taona sy tapany nitondran’i Andry Rajoelina, dia sekoly, toeram-pitsaboana sy kianja manara-penitra no notokanan’ny filoham-pirenena tamin’ireo toerana rehetra notsidihany. Omaly dia mbola nitokana ny Kianja manara-penitra ao Ambohi­dra­trimo ihany koa ny filoha izay natrehan’ireo mpilalao maromaro mandrafitra ny Barean’i Madagasi­kara sy ny mpanazatra teo aloha, Nicolas Depuis.
Tsy azo lavina fa tafiditra tao anatin’ireo Velirano nataon’ny filoha am-perinasa nandritra ny fampielezan-kevitra ireo foto-drafitrasa rehetra natsangana sy notokonana, saingy tsy tokony adinoin’ny mpitondra ihany koa fa anisan’ny lehibe indrindra tamin’ny fampanantenana nataony ny hitondra fiainana mamirapiratra ho an’ny Malagasy. Satria moa efa malaza ankehitriny ny hoe «manara-penitra», dia rariny sy hitsiny raha miandrandra ilay fiainana manara-penitra ihany koa ny vahoaka ary izay no tokony hataon’ny mpitondra vaindohan-draharaha. Mifanohitra amin’izany anefa ny zava-misy satria miha mahantra sy sahirana ny Malagasy, indrindra fa manoloana izao fisian’ny valan’aretina Covid-19 izao.
Efa nahazo manara-penitra maro ny sehatry ny fanabeazana, ny fahasalamana, ny fanatajahantena ary ny kolontsaina, fa mba aiza kosa ilay fampanaraham-penitra ny fiainana ara-tsôsialin’ny mponina ? Mazava ho azy fa rehefa sôsialim-bahoaka dia anisany tena voakasik’izany ny fahefa-mividy sy ny fari-piainan’ny mponina, ny fiahiana ara-tsôsialy, ny fanjarian-tsakafo, ny fahafahana mitsabo-tena araka ny tokony ho izy, sns sns. Ekena fa tsy ho vita ao anatin’ny roa na dimy taona mihintsy manala ny Malagasy ao anatin’ny fahantrana na iza na iza hitondra eo, saingy tokony hita taratra kosa ny ezaka ataon’ny fitondram-panjakana sy ny politika mazava hapetraka hahatongavana amin’izany. Hatreto anefa dia tsy hita tratra loatra izany fa ny foto-drafitrasa manara-penitra no mameno tanàna.